ब्यूटी पार्लरले बढायो सुन्दरी मोह | CNNepal
किन व्यत्तित्वमा ध्यान दिने ? के का लागि पार्लर जाने ?
पाँचबर्षदेखि मैतीदेवीस्थित ईमेज ब्यूटी ईन्स्टिच्युट एण्ड मेकअप स्टुडियोकी संञ्चालिका समेत रहेकी साबित्री भन्छिन् ‘सकभर गुणस्तरीय सामान मात्र बेचौँ, किनौँ, यसको लागी उपभोक्ताले राम्रो पार्लमा परामर्श गर्न सक्नेछन् ।
सौन्दर्यप्रतिको चेतसँगै नेपाली समाजामा नागरिकमा सौन्दर्य सामग्री प्रयोगमा बढ्दो रुचि देखिएको छ। बजारमा गुणस्तरयुक्त सौन्दर्यका सामग्रीको उपलब्धतासँगै यसको उपभोगक्ता बढ्दै गएका छन् । लाखौं रुपैयाँ लगानी गरिएका सुविधासम्पन्न पार्लर खुल्ले क्रम बढेसंगै सहरिया देखि ग्रामिण भेगसम्म सौन्दर्य बजारको पहुँच पुगेको छ ।
मुलुकका ठूला हुन् वा साना सहर सबैतिर कस्मेटिक पसल देख्न सकिन्छ । एक तथ्याङक अनुसार करिब १५ हजार बढी कस्मेटिक व्यवसायी सौन्दर्य व्यवसायमा संलग्न छन् । यसका अतिरिक्त किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सैलुन, ब्युटिपार्लर, फेन्सीस्टोर, मेडिकलबाट पनि सौन्दर्यका सामग्री बिक्री भइरहेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा आवद्ध व्यावसायीहरु बताउँछन् । गाउँमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा सहरमा यसको खपत बढ्दो छ ।
गाउँका भन्दा सहरका नागरिक चार गुणा बढीले सौन्दर्य सामग्री खपत गर्ने सौन्दर्य व्यवयीहरुको अनुभव छ । सामग्री प्रयोगमा अब उमेरको छेकबारसमेत हुन छाडेको छ । बालबालिकादेखि वृद्धसम्मले प्रयोग गर्छन् भने नारी–पुरुष सबैले सौन्दर्यको सामग्री प्रयोग गरेकै हुन्छन् ।
दिनप्रति दिन बढ्दो जीवनशैलीका कारण महिलाहरुमा अनुहार मेन्टेन गरी सुन्दरी हुने मोह बढेपछि ब्यूटी पार्लर ब्यवसाय छ ।
गुणस्तरीय सामान मात्र प्रयोग गरौं
सौन्दर्यको सामग्री बेच्नेदेखि उपभोक्तासम्मले सकभर गुणस्तरीय सामान मात्र प्रयोग गर्न जोड दिनुपर्ने सौन्दर्य व्यवसायीहरु बताउँछन् । मैतीदेवीस्थित ईमेज ब्यूटी ईन्स्टिच्युट एण्ड मेकअप स्टुडियोकी संञ्चालिका समेत रहेकी साबित्री भन्छिन् ‘सकभर गुणस्तरीय सामान मात्र बेचौँ, किनौँ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य र छालामा प्रत्यक्ष असर गर्ने सामान विक्रेताले पनि बेच्ने काम नगरौँ । उपभोक्ताले पनि सकभर गुणस्तरीय नै सामान रोज्ने गरौँ ।’
लिपिष्टकदेखि पाउडरसम्म विदेशबाटै
नेपालमा कस्मेटिक सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू न्यून छन् । त्यसैले आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । नेपालमा चीन, भारत, कोरिया, थाइल्यान्ड, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मन, दुबई, जापानबाट आयात हुने चेम्बार अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेशकाजी शाक्य बताउँछन् । ‘हाम्रो देशमा कस्मेटिकका सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी न्यून छ । त्यसैले आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । नेपालमा चीन, भारत, कोरिया, थाइल्यान्ड, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मन, दुबई, जापानबाट सौन्दर्यका सामग्री आयात गर्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन् ।
विशेष गरेर चीन र भारतबाट धेरै मात्रामा सौन्दर्यका सामग्री भेटिने गर्छ । यी मुलुकबाट नेपालीको औसत आम्दानीलाई लक्षित गरेर सामग्री आयात गरिने भएकाले केही कमसल वस्तु पनि आयात भइरहेका छन् । त्यतातर्फ भने सबैले सोच्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
ब्यूटिसियन साबित्री पाण्डे
सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नीति चाहियो ः सावित्री पाण्डे
नेपालमा दुईचार लाख देखि दशौं लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सौन्दर्य व्यवसायहरु खोलिएका छन् । ठाँउ र स्थान अनुसार आफ्नो जेथाअनुसार लगानी गरिएका छन् । तर, विडम्बना हाम्रो मुलुकमा सौन्दर्य प्रसाधनका उद्योग छैनन् । जतिले व्यवसाय गर्न चाहेपनि आयातमै निर्भर रहनुपरेको सौदर्य व्यवसायी साबित्री पाण्डे बताउँछिन् । मैतीदेवीस्थित ईमेज ब्यूटी ईन्स्टिच्युट एण्ड मेकअप कसटुडियोकी संञ्चालिका समेत रहेकी साबित्री भन्छिन् ‘सरकारले साथ दिएमा नेपाल हर्बल उत्पादनका लागि धेरै नै उर्वर भूमि हो, नेपाललाई विश्वमै जडीबुटीको देश भनेर चिनाउन सकिने थुप्रै आधार छन् । लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या पर्दैन ।’
त्यसो हुन सके गुणस्तरीय कस्मेटिक सामग्री उपभोक्ताले अझ सुलभ मूल्यमा पाउने वातावरण हुने उनको भनाई छ । सरकारले सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगतर्फ सरकारी नीति ल्याउनु जरुरी रहेको उनको धारणा छ । सामग्री व्यवसायी र लगानीकर्ताबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्न सकेमा कस्मेटिक उद्योगलाई उर्वर बनाउन सकिने सौन्दर्य व्यवासायीहरु बताउँछन् ।
SOURCEसी न्यूज नेपाल
Previous articleभेदभाव रहित अनुसन्धान, बोली व्यवहारमा व्यवसायिक भएर कार्य सम्पादन गर्नु : डिआइजी पोखरेल
Next articleएमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकार : प्रधानमन्त्री ओली